Nayakhabar.com: मन्त्री बन्ने वित्तिकै गगन थापाले ‘जनता क्लिनिक’मा किन स्वास्थ्य जँचाए ?
मन्त्री बन्ने वित्तिकै गगन थापाले ‘जनता क्लिनिक’मा किन स्वास्थ्य जँचाए ?
काठमाडौं । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले ‘जनता क्लिनिक’ मा जनतासँगै आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराएका छन् । आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा स्थापना गरेको कार्यालयले आयोजना गरेको क्लिनिकमा उनले स्वास्थ्य परीक्षण गराएका हुन् । मन्त्री थापा काठमाडौँं क्षेत्र नम्बर– ४ वाट संसद्मा निवार्चित हुनुभएको हो ।
मन्त्री थापाकै अवधारणामा तीन महिनाअघि क्लिनिक सुरु भएको थियो । कार्यालयका प्रमुख रोहित पौडेलले भने,‘‘ हरेक महिनाको पहिलो शनिबार क्लिनिक सञ्चालन हुने गरेको छ । तर यसपल्ट प्राविधिक कारणले पछि सरेको हो ।’’
बूढानिलकण्ठस्थित श्री जयभद्रकाली प्राथमिक विद्यालयमा बिहान १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म सञ्चालन भएको क्लिनिकमा ७६ जना वयस्क र ८७ जना बालबालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो ।